ပရီးမီးယားလိဂ် ကြီး(၆)ကြီးရဲ့ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး မှတ်တမ်းများ
ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်အသင်းတွေရဲ့ မှတ်တမ်းများ
21 Nov 2018 . 4:52 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကတော့ ပွဲစဉ်(၁၂)အထိ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးမှာ ဦးဆောင်နေပြီး လီဗာပူးလ်၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ကတော့ နောက်ကနေ ဖိအားလိုက်ပေးနေတယ်။ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ကြီး(၆)ကြီးရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တချို့ကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ပထမပိုင်းမှာ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ အာဆင်နယ်
ဒီရာသီ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး ပထမပိုင်းမှာ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတာက (၂)သင်းပဲရှိပြီး အာဆင်နယ်နဲ့ ကာဒစ်ဖ်အသင်းတို့ဖြစ်နေတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ပြိုင်ဘက်ကို ဦးဆောင်ထားနိုင်တာမျိုး မရှိပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းသွင်းဂိုးတွေကြောင့် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေတာလို့ ဆိုရမယ်။
Pass Master ချယ်လ်ဆီး
နည်းပြသစ် ဆာရီ Maurizio Sarri လက်ထက် သစ်လွင်တဲ့ ကစားဟန်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဘောလုံပေးပို့မှု အများဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ အခုအချိန်အထိ ဘောလုံးပေးပို့မှု စုစုပေါင်း (၈၇၀၆)ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပြီး မန်စီးတီးအသင်းထက် အကြိမ်(၅၀၀)ကျော် ပိုများနေတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ ဆာရီအသင်းဟာ တစ်ပွဲကို ပျမ်းမျှ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုက (၆၇.၈)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတာပါ။
ရာသီအစမှာ အမြင့်ပျံနေတဲ့ ကြိုးကြာနီ
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၁၂)ပွဲကစားအပြီး (၉)ပွဲနိုင်၊ (၃)ပွဲသရေကျခဲ့တာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီအစမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီတုန်းက လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အခုလိုပဲ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီးမှာ ရမှတ်(၃၀)အထိ ရယူခဲ့ပေမယ့် ဂိုးကွာခြားချက်မှာတော့ ဒီရာသီအသင်းက ပိုသာခဲ့ပြီး (+၁၈)အထိ ရှိနေတာပါ။
Great Wall လားထင်ရတဲ့ မန်စီးတီး ခံစစ်
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ခံစစ်ကတော့ တရုတ်ပြည်က မဟာတံတိုင်း (Great Wall)ကြီးအတိုင်းပါပဲ။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး ပေးဂိုး (၅)ဂိုးသာရှိသေးပြီး သူတို့နဲ့အတူ ပေးဂိုးအနည်းဆုံးဖြစ်နေတာက လီဗာပူးလ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ မန်ယူအသင်းကတော့ နောက်ထပ် မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၇၇-၇၈ နောက်ပိုင်း ပွဲစဉ်(၁၂)အပြီး အဆိုးရွားဆုံး Goal Difference ဖြစ်နေတာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းဟာ သွင်းဂိုး (၂၀)၊ ပေးဂိုး (-၂၁)ဖြစ်နေလို့ ဂိုးကွာခြားချက်က (-၁)ဖြစ်နေတာဟာ နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ စပါးအသင်းက ကစားသမားစုစုပေါင်း (၂၄)ဦးအထိ အသုံးပြုထားပြီး ကစားသမားအပြောင်းအလဲ အများဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ နည်းပြပိုချက်တီနို Mauricio Pochettino အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ(၂)ခုကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ကြိုးစားနေရတာကြောင့် ကစားသမားတွေ ပွဲမပန်းစေဖို့ အလှည့်ကျပုံစ ကျင့်သုံးနေတာလို့ပဲ ပြောရမယ်။
Photo:shorouknews,Daily Advent Nigeria,The Independent,The National,Getty Images,liverpooloffside
ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး ပရီးမီးယားလိဂျထိပျသီးကလပျအသငျးတှရေဲ့ မှတျတမျးမြား
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကတော့ ပှဲစဉျ(၁၂)အထိ ရောကျရှိလာပါပွီ။ ဒီအခြိနျမှာ မနျစီးတီးအသငျးက အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးမှာ ဦးဆောငျနပွေီး လီဗာပူးလျ၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့ကတော့ နောကျကနေ ဖိအားလိုကျပေးနတေယျ။ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး ပရီးမီးယားလိဂျကွီး(၆)ကွီးရဲ့ မှတျတမျးမှတျရာ တခြို့ကို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ပထမပိုငျးမှာ ဦးဆောငျနိုငျခွငျး မရှိသေးတဲ့ အာဆငျနယျ
ဒီရာသီ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး ပထမပိုငျးမှာ ဦးဆောငျနိုငျခွငျး မရှိသေးတာက (၂)သငျးပဲရှိပွီး အာဆငျနယျနဲ့ ကာဒဈဖျအသငျးတို့ဖွဈနတေယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပထမပိုငျးအပွီးမှာ ပွိုငျဘကျကို ဦးဆောငျထားနိုငျတာမြိုး မရှိပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးသှငျးဂိုးတှကွေောငျ့ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနတောလို့ ဆိုရမယျ။
Pass Master ခယျြလျဆီး
နညျးပွသဈ ဆာရီ Maurizio Sarri လကျထကျ သဈလှငျတဲ့ ကစားဟနျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ဘောလုံပေးပို့မှု အမြားဆုံးအသငျးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ အခုအခြိနျအထိ ဘောလုံးပေးပို့မှု စုစုပေါငျး (၈၇၀၆)ကွိမျပွုလုပျထားပွီး မနျစီးတီးအသငျးထကျ အကွိမျ(၅၀၀)ကြျော ပိုမြားနတေယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ တဈပှဲပမျြးမြှ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုကလညျး ကွောကျခမနျးလိလိပါပဲ။ ဆာရီအသငျးဟာ တဈပှဲကို ပမျြးမြှ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုက (၆၇.၈)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိနတောပါ။
ရာသီအစမှာ အမွငျ့ပြံနတေဲ့ ကွိုးကွာနီ
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၁၂)ပှဲကစားအပွီး (၉)ပှဲနိုငျ၊ (၃)ပှဲသရကေခြဲ့တာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး ရာသီအစမှတျတမျးဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီတုနျးက လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အခုလိုပဲ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီးမှာ ရမှတျ(၃၀)အထိ ရယူခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးကှာခွားခကျြမှာတော့ ဒီရာသီအသငျးက ပိုသာခဲ့ပွီး (+၁၈)အထိ ရှိနတောပါ။
Great Wall လားထငျရတဲ့ မနျစီးတီး ခံစဈ
မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ခံစဈကတော့ တရုတျပွညျက မဟာတံတိုငျး (Great Wall)ကွီးအတိုငျးပါပဲ။ မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး ပေးဂိုး (၅)ဂိုးသာရှိသေးပွီး သူတို့နဲ့အတူ ပေးဂိုးအနညျးဆုံးဖွဈနတောက လီဗာပူးလျဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ မနျယူအသငျးကတော့ နောကျထပျ မှတျတမျးဆိုးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွနျပါပွီ။ အဲဒါကတော့ ၁၉၇၇-၇၈ နောကျပိုငျး ပှဲစဉျ(၁၂)အပွီး အဆိုးရှားဆုံး Goal Difference ဖွဈနတောပါပဲ။ မနျယူအသငျးဟာ သှငျးဂိုး (၂၀)၊ ပေးဂိုး (-၂၁)ဖွဈနလေို့ ဂိုးကှာခွားခကျြက (-၁)ဖွဈနတောဟာ နှဈပေါငျး(၄၀)ကြျောအတှငျး ပထမဆုံးဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီမှာ စပါးအသငျးက ကစားသမားစုစုပေါငျး (၂၄)ဦးအထိ အသုံးပွုထားပွီး ကစားသမားအပွောငျးအလဲ အမြားဆုံးအသငျးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ နညျးပွပိုခကျြတီနို Mauricio Pochettino အနနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ၊ ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲ(၂)ခုကွား ဟနျခကျြညီအောငျ ကွိုးစားနရေတာကွောငျ့ ကစားသမားတှေ ပှဲမပနျးစဖေို့ အလှညျ့ကပြုံစ ကငျြ့သုံးနတောလို့ပဲ ပွောရမယျ။